Madaxda Muslimiinta - Wikipedia
Caqiidada Muslimiinta waxaa ka mid ah inaan lala dagaalamin madaxda Muslimiinta ah.
Haddaanu nahay Muslimiin waxaan u aragnaa inay waajib tahay inaan adeecno Madaxdeena Muslimiinta, oo ay tahay annagoo adeecnay Eebbe Kor ahaaye, haddaysan na farin wax dembi ah, oo waa tii uu Eebbe yiri: Adeeca Eebbe oo adeeca Rasuulka iyo Madaxdiina idin ka midka ah. Umana aragno in lagu baxo oo lagu kaco madaxdeena Muslimiinta ah haba na dulmiyeene.
Kamana tagayno inaan adeecno Madaxdeena haba na dulmiyeene. Culimada waxay ku fasireen: Oo haddii lagu kaco oo laga tago in la adeeco Madaxdeena, waxaa ka dhalaneysa dhibab ka waaweyn midka ay dadka iyaga ku hayaan, ee waa inaan u dulqaadanaa dulmigooda oo waxay tirtireysaa xumaanta, maxaa yeelay Eebbe naguma saladin waxaan samaynayno oo xun darteed mooyee. Sidaas darteed waa inaan ku dadaalno inaan badino dembidhaafka iyo inaan isku barbaarino Islaamka saxda ah, waxaan samaynaynana waa inaan hagaajino oo Eebbe waa tii uu yiri: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) Sidaas oo kale ayaanu madax uga dhignaa qaar ka mid ah Dulmi-wadayaasha qaarka kale wixii ay samayn jireen darteed. Sidaas darteed haddii ay doonayaan muwaadiniinta inay ka badbaadaan dulmiga xaakimka daalimka ah, ha iska daayaan dulmiga ay samaynayaan nafsaddooda.
Al-callaama Sheekh Albaani isagoo ka faaloonayana arinkan wuxuu yiri: Waxaa halkaas nooga caddaatay qaabka aan uga badbaadi karno dulmiga Madaxda Muslimiinta kuwaa soo ”annaga naga midka ah oo ku hadlaya afafkeena” waana inay Muslimiinta u noqdaan Rabbigooda, oo ay toosiyaan Caqiidadooda, oo ay ku barbaariyaan nafsaddooda iyo reerahooda Islaamka saxda ah, annaga oo ka dhabaynayno hadalkii Eebbe: (إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا مابأنفسهم) (الرعد:11) Eebbe ma beddelo dad ilaa maa ay nafsaddooda isbeddelaan.
Waxaana sidaas tilmaamay mid ka mid ah Ducaadda Mucaasiriinta isagoo leh:
(أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم, تقم لكم علي أرضكم) Ku dhaqma nafsaddiina Islaamka, kolkaasay dadkuna ku dhaqmayaan.siil ween was sooliyee
Mana aha jidka lagu badbaadayo siday u malaynayaan qaar ka mid ah dadka, oo ah in hub loo qaato madaxda, iyadoo la adeegsanayo afgembiyada xoogga ku dhisan, inkastoo ay ka mid tahay Bidcooyinka waqtigan la joogo, haddana waxay ka hor imaanaysaa sida ku soo aroortay Shareecada Islaamka taas oo waxyaabaha la is faray ay ka mid tahay qofka nafsaddiisa inuu isbeddel la yimaado. Sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah inaan ula nimaadno sida saxda ah, oo Eebbe Kor ahaaye waa tii uu yiri: (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) (الحج:40) Eebbana wuxuu u gargaari qofkii isaga u gargaara ”Diintiisa”.
Waxaan qoraalkan ka turjumay kitaabka Caqiida ad-Daxaawiya ee uu qoray al-Callaama ad-Daxaawi oo geeriyooday 321 H. Oo uu ka dibna sharxay al-Callaama Ibnu Abii - al-Ciz oo geeriyooday 792 H.
Waxaana ka faalooday qoraalkan al-Callaama Sheekh Maxamed Naasirud-diin al-Albaani oo geeriyooday 1420 H. Eebbana ha u naxariisto dhamaantood.
Turjume CabdiRisaaq Maxamed Cilmi soomaliyeey wasa siil hooya diin
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Madaxda_Muslimiinta&oldid=219074"